Taratasy ho an'ny mpiasa avy amin'i J. Tkach - Church of God Switzerland of the World
Na manao ahoana na manao ahoana ny tarehin-javatra misy anao, na toa mahonena toa inona aza ny zavatra, Andriamanitra mahatoky no mijanona ho mahatoky ary Mpamonjy antsika be fitiavana sy be fitiavana. Araka ny nosoratan'i Paoly dia tsy misy mahasakana antsika amin'Andriamanitra na mampisaraka antsika amin'ny fitiavany: «Inona ary no hahasaraka antsika amin'i Kristy sy ny fitiavany? Fijaliana sy tahotra angamba? Fanenjehana? Hanoanana? Fahantrana? Loza sa fahafatesana mahery setra? Tena voatsabo tokoa izahay araka ny efa voalaza ao amin'ny Soratra Masina: Satria anao izahay, Tompoko, enjehina sy novonoina izahay, dia novonoina toy ny ondry! Fa ...
Ity taratasy ity no taratasy farany isam-bolana amin'ny maha GCI mpiasa ahy satria miala sasatra amin'ity volana ity aho. Rehefa mieritreritra ny tenako aho amin'ny maha filohan'ny fikambananay antsika finoana dia maro ny fitadidiana tonga ao an-tsaina fa nomen'Andriamanitra antsika. Ny iray amin'ireo fitahiana ireo dia misy ifandraisany amin'ny anarantsika - "Fahasoavana Fahasoavana Iraisam-pirenena". Mihevitra aho fa tsara ny mamaritra ny fiovantsika fototra amin'ny maha-vondrom-piarahamonina. Tamin'ny alàlan'ny fahasoavan'Andriamanitra dia lasa vondrom-pinoana iraisam-pirenena sy fiombonam-pinoana (fiombonana) isika izay ...
Tamin’ny alalan’ny fiainany sy ny fahafatesany ary ny fitsanganany tamin’ny maty no nanomezan’i Jesosy ny olombelona sanda izay mihoatra lavitra noho izay mety ho vitantsika, na mendrika na noeritreretintsika mihitsy aza. Hoy ny apostoly Paoly: “Eny, mbola heveriko ho manimba ny fahalalana tsara an’i Kristy Jesosy Tompoko izany rehetra izany. Noho ny aminy no nahatonga izany rehetra izany tamiko, ary heveriko fa fahalotoana izany, mba hahazoako an’i Kristy. » (Fil. 3,8). Fantatr'i Paoly fa ny fifandraisana velona sy lalina amin'Andriamanitra amin'ny alalan'i Kristy dia manana sanda tsy manam-petra - tsy azo tombanana ...
Hisy foana izay milaza ho mpaminany na mino fa afaka manao kajy ny andro hiverenan’i Jesosy. Vao haingana aho no nahita ny tantaran'ny raby iray voalaza fa afaka mampifandray ny faminanian'i Nostradamus amin'ny Torah. Nisy olona iray nilaza mialoha fa hiverina amin’ny Pentekosta i Jesosy 2019 hitranga. Maro ny tia faminaniana miezaka mampifandray ny vaovao farany sy ny faminaniana ara-baiboly. Kark Barth dia nananatra ny olona mba hifikitra mafy ao amin'ny Soratra Masina rehefa nitady ...
Nisy taom-baovao hafa nanomboka. Betsaka ny olona nandray fanapahan-kevitra tsara ho an'ny taom-baovao. Matetika dia mikasika ny fahasalamana manokana izany - indrindra rehefa avy misakafo sy misotro be mandritra ny fialantsasatra. Ny olona manerana an'izao tontolo izao dia manaiky ny hanao fanatanjahan-tena bebe kokoa, mihinana zava-mamy ary matetika dia maniry ny hanao tsara kokoa. Na dia tsy misy tsy mety aza ny fandraisana fanapahan-kevitra toy izany, ny Kristiana dia tsy manana zavatra amin'ity fomba ity.
Ireo vahaolana ireo dia misy ifandraisany amin'ny herin'olombelona, ​​ary matetika izy ireo no mivoaka. Raha ny marina,
Jesosy, ilay Zanak’Andriamanitra velona mandrakizay, dia tonga olombelona. Raha tsy misy izany dia tsy hisy ny tena Kristianisma. Hoy ny apostoly Jaona: Izao no tokony hahafantaranao ny Fanahin’Andriamanitra: Ny fanahy rehetra izay manaiky fa tonga nofo Jesosy Kristy dia avy amin’Andriamanitra; ary ny fanahy rehetra izay tsy manaiky an'i Jesosy dia tsy mba avy amin'Andriamanitra. Ary izany no fanahin’ny Antikristy izay renareo fa ho avy, sady efa eo amin’izao tontolo izao sahady izy (1. John 4,2- iray).
Ny niteraky ny virjin'i Jesôsy dia nanazava fa ny Zanak'Andriamanitra dia tonga olombelona tanteraka tahaka azy ...
Na dia iray amin'ireo foto-kevitro indrindra aza ny famelan-keloka avy amin'Andriamanitra, dia tsy maintsy miaiky aho fa sarotra ny mamantatra hoe tena misy tokoa izy io. Hatrany am-boalohany dia nokendren'Andriamanitra ho fanomezana malala-tanana izany, dia famelan-keloka lafo vidy ary fampihavanana nataon'ny zanany lahy, izay faratampony no nahafatesany teo amin'ny hazo fijaliana. Vokatr'izany, tsy vitan'ny hoe navotsotra isika, averina - ampifanarahana amin'ilay Andriamanitra telo izay be fitiavana.
Ao amin'ny bokiny "Sorompanavotana: ny olona sy ny asan'i Kristy" [fampihavanana: ny olona sy ny asan'i Kristy] dia manana…
Ny 20 septambra dia nankalaza ny Taom-baovao ny Jiosy, fetibe manan-danja. Araka izany dia mankalaza ny fiandohan'ny tsingerin-taona isan-taona ny olona iray, ho fahatsiarovana ny namoronana an'i Adama sy Eva ary koa dia mankalaza ny famoronana izao rehetra izao, izay ao anatin'izany ny fiandohan'ny fotoana. Rehefa namaky momba ny fotoana aho, dia tsaroako fa misy dikany maro koa ny fotoana. Ny iray dia ny fotoana dia fananan'ny fananana miliara sy mpangataka amin'ny fotoana mitovy. Manana 86.400 isan-tsegondra isan'andro isika rehetra. Saingy satria tsy afaka mamonjy azy ireo isika (tsy afaka mihemotra na esorina ny fotoana), ...
Friedrich Nietzsche (1844-1900) dia nantsoina hoe "atheiste faratampony" noho ny fanakianana nataony momba ny finoana kristiana. Nambarany fa ny Soratra Kristiana, indrindra indrindra noho ny fanamafisana ny fitiavana, dia vokatry ny fahantrana, ny kolikoly ary ny valifaty. Tsy nieritreritra mihitsy aza izy fa mety ny fisian'Andriamanitra, fa izy kosa nilaza tamin'ny heviny malaza hoe "Maty Andriamanitra" fa maty ny hevitra lehiben'ny andriamanitra. Nikasa ny hanova ny finoana kristiana nentim-paharazana (izay nantsoiny hoe finoana taloha taloha nodimandry) tamin'ny ...
Ao amin'ny kolontsaintsika, ny teny hoe fahagagana dia matetika ampiasaina kely kokoa. Raha ohatra, amin'ny fanitarana ny lalao baolina kitra dia misy ekipa mbola mahavita manaitra ny tanjona mandresy amin'ny tifitra mahatratra 20 metatra, mety hiresaka fahagagana iray ny mpaneho hevitra sasany amin'ny TV. Nandritra ny fampisehoana mivezivezy iray, nanambara fahagagana efatra sosona nataon'ny mpanakanto iray ny talen'ny asa fitoriana. Eny, tsy azo inoana fa fahagagana izany, fa fialamboly mahafinaritra.
Ny fahagagana dia hetsika mahatalanjona izay mihoatra noho ny taranaka tsy mandova ...
Io filozofa sy teolojiana io no resahina ho toy ny olan'ny saina (aretin-tsaina). Tsy olana amin'ny fifandrindran'ny môtô tsara (toy ny fisotro amin'ny kaopy tsy mandoa zavatra na manipy ny tsy mety rehefa milalao daroka). Fa kosa, ny fanontaniana dia raha ara-batana ny vatantsika ary ara-panahy ny fisainantsika; raha lazaina amin'ny teny hafa, na ara-batana fotsiny ny olona na fifangaroana ara-batana sy ara-panahy.
Na dia tsy miresaka mivantana ny olana ara-tsaina aza ny Baiboly, dia misy firesahana mazava momba ny ...
Nandritra ny fotoana nijanonanay teo amin'ny lapan'ny seranam-piaramanidina nandritra ny fotoana fohy nandehananay sy i Tammy, dia nahatsikaritra tovolahy iray nipetraka teo amin'ny seza roa aho ary nitsidika ahy matetika. Rehefa afaka minitra vitsivitsy, dia nanontany ahy izy hoe: "Azafady indrindra aho, ianao ve Andriamatoa Joseph Tkach?" Faly izy niresaka tamiko ary nilaza tamiko fa voaroaka haingana tao amin'ny vondron'olona Sabbatarianina izy. Tsy ela dia nitodika tany amin'ny lalàn'Andriamanitra ny resakay - nahita fa mahaliana ahy ny tenin'ny Kristiana mba hahalala fa Andriamanitra ...
Indraindray aho dia miresaka amin'ireo mpino izay mahita fa sarotra ny mahazo ny antony hoe Andriamanitra Masina, toa ny Ray sy ny Zanaka dia Andriamanitra - iray amin'ny olona telo ny Trinite. Matetika aho dia mampiasa ohatra ao amin'ny soratra masina mba hampisehoana ireo toetra sy fihetsika izay mamantatra ny Ray sy ny Zanaka amin'ny maha-olona ary ny Fanahy Masina dia voaresaka mitovy amin'ny olona iray. Avy eo dia notononiko ireo anarana marobe ampiasaina ilazana ny Fanahy Masina ao amin'ny Baiboly. Ary farany, miditra amin'ny fampianaran'i Jesosy momba ny Fanahy Masina aho. Amin'ity ...
Noho ny finiavana ny hanome azy irery ihany no tsara indrindra, dia niaraka tamin'i Tammy (vadiko) hisakafo ato amin'ny Burger King (araka ny tianao), avy eo mankany amin'ny Mpanjakavavy Dairy hisakafo tsindry (zavatra hafa). Mety hieritreritra ianao fa tokony ho menatra aho noho ny fampiasana an-tsokosoko ny teny filamatra amin'ny orinasa, fa araka ny nametrahan'i McDonalds azy: "Tiako io". Izao aho tsy maintsy manontany anao (ary indrindra Tammy!) Ho famelan-keloka ary avelao hialokaloka ilay vazivazy vendrana. Ny famelan-keloka dia fanalahidy amin'ny fananganana sy ny fanamafisana ny fifandraisana izay maharitra sy manome hery. Mihatra amin'ny fifandraisana eo amin'ny ...
Ny bokin’i Nehemia, izay iray amin’ireo boky 66 ao amin’ny Baiboly, dia azo inoana fa iray amin’ireo tsy dia voamarika loatra. Tsy mirakitra vavaka sy hira avy amin’ny fo toy ny Salamo izy io, tsy misy fitantarana lehibe momba ny famoronana toa ny Bokin’ny Genesisy (1. Mosesy) ary tsy misy tantaram-piainan'i Jesosy na ny teolojian'i Paoly. Kanefa, amin’ny maha-teny ara-tsindrimandrin’Andriamanitra azy, dia zava-dehibe toy izany amintsika koa izany. Mora ny manadino azy io rehefa mamaky ny Testamenta Taloha, saingy afaka mianatra zavatra betsaka avy amin'ity boky ity isika - indrindra momba ny firaisankina marina sy ny fiainana fakan-tahaka.
Ny boky Nehemia dia lasa iray amin'ny ...
Amin'ny fiteny anglisy, ny tsipika "Ilay ramatoa, araka ny eritreritro, dia nidera ny [anglisy anglisy: fihetsiketsehana] be" dia notsongain'i Shakespeare's Hamlet, mitanisa olona iray manandrana mandresy lahatra ny hafa amin'ny zavatra tsy marina. Io fehezanteny io dia tonga ao an-tsaina rehefa maheno an'ireo ateyista izay manohitra fa tsy mino an'Andriamanitra ny ateyisme. Ny sasany tsy mino an'Andriamanitra dia manohana ny fihetsiketsehana amin'ireto fampitahana syllogistic ireto manaraka ireto:
Raha fivavahana ny tsy mino an'Andriamanitra dia ny volon-dehilahy dia "volo". Na dia mety ho lalina aza izany, dia hisy ihany ny ...
Mba asao koa azafady fa olona tsy manana ...
Isan-taona amin'ny faha-25. Desambra, ny Kristianisma dia mankalaza ny nahaterahan'i Jesosy, Zanak'Andriamanitra, naterak'i Maria Virjiny. Tsy mirakitra fanazavana momba ny daty nahaterahana marina ny Baiboly. Tsy tamin’ny ririnina angamba no nahaterahan’i Jesosy rehefa nankalaza azy io isika. Nilaza i Lioka fa nanome baiko ny Emperora Aogosto fa tsy maintsy nosoratana tao amin’ny lisitry ny hetra ny mponin’ny tontolo romanina manontolo (Lk. 2,1) ary “dia samy nankany amin’ny tanànany avy mba hosoratana”, anisan’izany i Josefa sy i Maria izay bevohoka (Lk 2,3-5). Ny manam-pahaizana sasany dia manana ny andro nahaterahan'i Jesosy tamin'ny ...
Izay rehetra mahalala ahy dia mahalala fa olona fatratra ny toetran'ny mpivavaka amin'ny Sherlock Holmes aho. Manana lahatsoratra mpankafy an'i Holmes bebe kokoa aho raha te hanaiky ny tenako. Nitsidika ny Museum Sherlock Holmes aho tamin'ny 221b Baker Street any Londres imbetsaka. Ary mazava ho azy Tiako ny mijery ireo sary maro mahaliana natao momba an'io toetra mahaliana io. Manantena manokana aho amin'ireo fizarana vaovao farany amin'ny famokarana BBC farany, izay anaovan'ny sarimihetsika benedict Cumberbatch ilay sarimihetsika malaza Benedict Cumberbatch.
Nandritra ny taona maro dia nifady hanina aho Yom Kippur (Alemanina: Andro Fanavotana), ilay fialantsasatra jiosy ambony indrindra. Nanao izany tamim-pinoana diso aho fa nihavana tamin'Andriamanitra tamin'ny alàlan'ny tsy fiantsoana sakafo sy tsiranoka tamin'io andro io. Maro amintsika no mbola mahatadidy an'ity fomba fisainana diso ity. Na izany aza dia nohazavaina taminay, ny fikasana hifady hanina amin'i Yom Kippur dia ny hahatanteraka ny fampihavanantsika (Ver-Sohn-ung [= fananganan'anaka amin'ny maha zanaka, fanamarihana ny Üs]) miaraka amin'Andriamanitra amin'ny alàlan'ny asantsika manokana. Nanao rafi-pivavahana fahasoavana miampy asa izahay - ary tsy hita ny ...
Tamin'ny volana septambra (tamin'ity taona ity indrindra tamin'ny 3. Oktobra [d. Üs]) nankalaza ny Taom-baovao, “Rosh Hashanah” ny Jiosy, izay midika hoe “lohan’ny taona” amin’ny teny hebreo. Anisan’ny fanaon’ny Jiosy ny mihinana lohan-trondro, izay mariky ny lohan’ny taona, ary mifampiarahaba amin’ny hoe “Leschana towa”, izay midika hoe “Mirary taona sambatra!”. Araka ny lovantsofina dia misy ifandraisany ny andro firavoravoan’i Rosh Hashanah sy ny andro fahenina amin’ny herinandro famoronana, izay namoronan’Andriamanitra ny olombelona.
Ao amin'ny soratra hebreo ny 3. Bokin’i Mosesy 23,24 raha atao hoe "Sikron Terua" ny andro, ...
Heveriko fa efa nandia fotoana famoizam-po koa ianao rehefa nitalaho an 'Andriamanitra mba hitsabaka. Angamba efa nivavaka fahagagana ianao, nefa hita mazava fa foana; tsy nahomby ilay fahagagana. Heveriko koa fa faly ianao nahafantatra fa voavaly ny vavaka natao hanasitranana olona iray. Fantatro ramatoa iray izay nitombo ny taolan'izy ireo rehefa avy nivavaka ny fanasitranana azy. Nanoro hevitra azy ny dokotera hoe: "Na inona na inona ataonao dia tohizo foana!" Maro amintsika, azoko antoka, mahazo fampaherezana sy ampaherezana satria fantatsika fa ...
Ao amin'ny iray amin'ireo horonan-tsarimihetsika voalohany nataony, hoy i John Wayne tamin'ny mpiara-mitety kanosa iray hafa: "Tsy tiako ny miasa amin'ny vy marika - maharary ho any amin'ny toerana tsy izy!" Hitako fa tena mampihomehy ilay fanamarihany, saingy nahatonga ahy koa izany. misaintsaina ny fomba mety hanimba ny filazantsara ny fiangonana amin'ny alàlan'ny fampiasana tsy mamitaka ny marketing toy ny fampiroboroboana ny vokatra marika. Taloha, ny mpanorina anay dia nitady toerana fivarotana matanjaka ary nataonay ho "fiangonana tokana". Ity fomba ity dia nisy fiatraikany tamin'ny Baiboly ...
Ny maha-reny dia iray amin'ireo asa lehibe indrindra teo amin'ny famoronan'Andriamanitra. Tonga tao an-tsaiko izany rehefa nieritreritra ny vao haingana aho hoe inona no omeko ny vadiko sy ny rafozako amin'ny Andron'ny Neny. Tiako ny mahatadidy ny tenin-dreniko, izay nilaza tamiko matetika ny rahavaviko ary tena faly izy fa neny. Ny hananana antsika dia hanome antsika fahatakarana vaovao momba ny fitiavana sy ny fahalehibiazan'Andriamanitra. Azoko ihany hoe rehefa teraka ny zanakay manokana. Mbola tsaroako ny fahagagana nataoko rehefa narary ny vadiko Tammy ...
Black History Month dia nankalazaina eto Etazonia isaky ny volana febroary. Mandritra izany fotoana izany dia ankalazainay ny zava-bita maro izay nomen'ny Amerikanina amerikana anjara amin'ny fahombiazan'ny firenentsika. Mankalazainay koa ny fijaliana mijaly, avy amin'ny fanandevozana, ny fanavakavaham-bolon-koditra mankany amin'ny fanavakavahana mbola misy. Tamin'ity volana ity aho dia tsapako fa misy ny tantara ao am-piangonana izay matetika no tsy adino - ny anjara toerana lehibe izay nilalao am-piangonana afrikana amerikana tany am-piandohana ...
Any amin’ny faran’ny Filazantsarany dia afaka mamaky ireto teny manaitra nataon’ny apostoly Jaona ireto ianao: “Ary Jesosy nanao famantarana maro hafa koa teo anatrehan’ny mpianany, izay tsy voasoratra amin’ity boky ity [...] hafa, dia ataoko fa tsy azon’izao tontolo izao ny boky tokony hosoratana” (Jaona 20,30:2; ).1,25). Miorina amin'ireo fanamarihana ireo sy ny fiheverana ny fahasamihafana misy eo amin'ireo Filazantsara efatra, dia azo tsoahina fa ireo fanehoana voalaza ireo dia tsy nosoratana ho soritra feno ny fiainan'i Jesosy ...
Rehefa mitsangatsangana aho dia matetika no nasaina hiteny amin'ny serivisy fiangonana, fihaonambe ary fivoriana fivoriana eo amin'ny fiangonana. Indraindray aho dia nasaina hiteny ny tsodrano farany. Tamin'izay aho dia nitso-drano ny fitahian'i Aaron tany an-tany efitra tamin'ny zanak'israely (tamin'ny taona taorian'ny nandosiran'izy ireo an'i Egypt ary efa ela talohan'ny nidirany tany amin'ny Tany Nampanantenaina). Tamin'izany fotoana izany Andriamanitra dia nanoro ny Isiraely ny fampiharana ny lalàna. Malalaka ny olona ary somary mavitrika (raha ny marina, andevo izy ireo nandritra ny androm-piainany ...
Milaza ny Soratra Masina fa “nalaim-panahy tamin’ny zavatra rehetra toa antsika i Jesosy, nefa tsy nanota” (Heb. 4,15). Io fahamarinana manan-danja io dia hita taratra ao amin’ny foto-pampianarana kristiana ara-tantara, izay araka ny niasan’i Jesosy, tamin’ny nahatongavany ho nofo, dia toy ny hoe mpisolovava.
Ny teny latina hoe vicalie dia midika hoe "manao zavatra ho solontena na governora ho an'ny olona iray". Miaraka amin'ny maha-tonga nofo azy, ny Zanak'Andriamanitra mandrakizay dia lasa olona teo am-piarovana ny maha-Andriamanitra Azy. Ao anatin'izany toe-javatra izany, niresaka momba ny "fifanakalozana mahagaga" i Calvin.
Raha nanontaniana momba ny zavamananaina tranainy indrindra ny sasany dia mety hilazana ny hazo kesika 10.000 taona any Tasmania na ny hazo mirehitra 40.000 200.000 taona any. Ny sasany dia mety mieritreritra ny voan-dranomasina taona any amin'ny morontsiraky ny Nosy Balearic Espaniola. Rehefa antitra ireo zavamaniry ireo dia misy zavatra zokiolona kokoa - ary io dia Andriamanitra Mandrakizay, izay ambara ao amin'ny Soratra Masina ho fitiavana velona. Ny toetran'Andriamanitra maneho amin'ny tenany amin'ny fitiavana. Ny Fitiavana manjaka eo amin'ny olona ao amin'ny Trinite (Trinite) dia efa talohan'ny namoronana ny ...
Fotoam-piheverana ny vanim-potoana ny Advent sy ny Noely. Fotoana handinihana an'i Jesosy sy ny Fahatongavany ho nofo, fotoam-pifaliana sy fanantenana ary fampanantenana. Ny olona eran-tany dia manambara ny fahaterahany. Ny karolan'ny Noely iray aorian'ny iray dia re momba ny etera. Ao amin'ireo fiangonana dia ankalazaina amin'ny filalaovana crib, cantatas ary hira chant ny festival. Fotoan'ny taona izay hieritreretan'ny besinimaro hianatra ny marina momba an'i Jesosy Mesia.
Saingy indrisy fa maro no tsy mahalala ny dikan'ny vanim-potoana Krismasy ary mankalaza ny fetibe izy ireo ...
Rehefa nahita ity fomba siantifika momba ny fahasambarana ity tao amin'ny lahatsoratra Psychology Today aho dia nihomehy mafy:
Na dia mitondra fahasambarana eo noho eo aza izany fandaharana tsy misy dikany izany, dia tsy fifaliana maharitra. Azafady azafady fa diso; Tiako ny mihomehy tsara toy ny olon-drehetra. Izany no antony ankasitrahako ny tenin'i Karl Barth: “Lazaina; no zavatra misongadina indrindra momba ny fahasoavan'Andriamanitra. “Na dia afaka mampihomehy antsika aza ny fahasambarana sy ny fifaliana, misy fahasamihafana lehibe eo amin'izy roa. Fahasamihafana izay niainako nandritra ny taona maro lasa izay rehefa ...
Indraindray isika mankamin'ny fankalazana ny Noely amin'ny fahatongavan'Ny Zanak'Andriamanitra tamim-pahazotoana tokoa ka namela ny Advent hipetraka eo amin'ny seza aoriana, izany hoe ny fotoana hanombohan'ny taom-piangonana kristiana. Ny Alahady efatra amin'ny Advento dia manomboka amin'ity taona 29 Novambra ity ary manambara ny Noely, ilay fetin'ny fahaterahan'i Jesosy Kristy. Ny teny hoe "Advent" dia nalaina avy amin'ny adventus latinina ary midika zavatra toa ny "fahatongavana" na "fahatongavana". Nandritra ny Advento dia nankalazaina ny "fiavian'i" telo Jesosy (matetika amin'ny filaharana mifanohitra): ny ...
Fony aho zatovo tanora dia nipetraka tao amin'ny teatra sarimihetsika aho rehefa nivoaka ny herinaratra. Tamin'ny andro maizina dia nitombo ny fimenomenonan'ny mpihaino. Tsikaritro fa tsy mahagaga raha nanandrana nitady fivoahana aho raha vantany vao nisy nanokatra varavarana teo ivelany. Jiro narotsaka tao amin'ny teatra sarimihetsika ary vita ny fifangaroana ary vetivety dia tara ny fikarohana nataoko.
Mandra-pahatongan'ny fiatrehantsika haizina, manamaivana ny ankamaroantsika isika. Na izany aza, tsy misy zavatra tsy hita raha tsy misy ny mazava. Tsy mahita afa-tsy zavatra isika rehefa manazava efitrano iray ny hazavana. Aiza ity ...
Vao tsy ela aho dia nahita horonantsary iray izay manala ny varotra amin'ny fahitalavitra. Tamin'ity tranga ity dia momba ny CD kristiana foronina iray izay mitondra ny lohateny hoe "All About Me". Ahitana ny hiran'ny CD ny hira: "Tompo aho manandratra ny anarako any ambony", "manandratra ahy" ary "tsy misy tahaka ahy". (Tsy misy tahaka ahy). Strange? Eny, maneho ny fahamarinana mampalahelo izany. Isika olombelona te hivavaka amin'ny tenantsika fa tsy Andriamanitra. Araka ny nolazaiko tato ho ato, io fironana io dia manelingelina ny fianarantsika ara-panahy ...
Maro aminareo no mahalala fa rehefa mitsangantsangana aho dia tiako hiresaka ny fiteniko momba ilay fiteny eo an-toerana. Faly aho fa tsy mihoatra "hello" tsotra fotsiny. Indraindray kosa, manelingelina ahy na tsy ankafaliana ilay fiteny. Na dia nahalala teny vitsivitsy tamin'ny fiteny samy hafa sy fiteny grika sy hebreo aza nandritra ny fianarako nandritra ny taona maro izay dia ny fiteny Anglisy no tenin'ny foko. Toy izany koa ny fiteny izay ivavahako.
Rehefa mieritreritra vavaka aho dia tsaroako ny tantara iray. Nisy lehilahy iray maniry an'izany ...
Zava-dehibe ho antsika ny teolojia satria manome endrika ho an'ny zavatra inoantsika. Na izany aza, misy ny teolojika maro, na dia ao anatin'ny fiaraha-monina kristiana aza. Ny iray mampiavaka ny WKG / GCI ho vondron'olona mino dia ny fanolorantenantsika izay azo lazaina ho "teolojia Trinité". Na dia betsaka aza ny fampianarana momba ny Andriamanitra telo izay iray dia teo amin'ny tantaran'ny fiangonana dia nisy ny niantso azy io hoe "fotopampianarana adino" satria azo raisina matetika izany. Na izany aza, amin'ny WKG / GCI dia mino isika fa ny zavamisy, izany hoe, ...
Izahay dia mivezivezy amin'ny maha-mpanao majika, voafatotra amin'ny rojo ary mahazo tokana, ahena ao anaty fitoeran-drano lehibe. Avy eo mihidy ilay tampony ary ilay mpanampy mpanao majika mijoro eo amboniny ary manarona ilay tankina amin'ny lamba manarona azy. Rehefa afaka fotoana vitsivitsy dia nirodana ilay lamba ary gaga izahay ary faly fa ny mpanao majika izao dia ao anaty tanky ary ny mpanampy azy, voatana amin'ny gadra. Ity "fifanakalozana" tampoka sy mistery ity dia mitranga marina eo imasontsika. Fantatsika fa misy ...
Isan-taona ny alahady Paska dia miangona manerana an'izao tontolo izao ny kristiana hankalaza ny fitsanganan'i Jesosy. Misy olona mifampiarahaba amin'ny fifampiarahabana nentim-paharazana. Io teny io dia milaza: "efa nitsangana izy". Ho valin'izany, ny valiny dia: "Tena nitsangana izy!" Tiako ny hankalazantsika ny vaovao tsara amin'ity fomba ity, fa ny valin-kafatra amin'ny fiarahabana azy dia toa tsy dia misy dikany loatra. Saika mitovy aminy ny manana "Koa ahoana?" dia hampiana. Izany no nahatonga ahy hisaina.
Taona maro lasa izay rehefa nanontany tena ny tenako aho dia mandray ny fitsanganana amin'ny maty ...
Faly aho rehefa hoy ny olona hoe: "Raha tsy mahita aho dia tsy hino izany." Matetika aho no maheno izany hoy ny olona rehefa misalasala ny fisian'Andriamanitra na ny fampidirany ny olona rehetra amin'ny fahasoavany sy ny famindram-pony. Mba tsy hampahatezitra, dia manondro aho fa tsy mahita magnetika na herinaratra isika, fa fantatsika avy amin'ny vokatr'izy ireo fa misy izy ireo. Toy izany koa amin'ny rivotra, ny herim-po, ny feo ary ny eritreritra mihitsy aza. Amin'izany fomba izany no ahatsapantsika ilay antsoina hoe "fahalalana tsy misy ohatra". Tiako ny manana fahalalana toy izany ...
Tratry ny taom-baovao! Manantena aho fa nanao fialan-tsasatra sambatra miaraka amin'ireo olona tianao. Ankehitriny rehefa ao ambadiky ny vanim-potoanan'ny Krismasy ary hiverina any am-piasana isika amin'ny taona vaovao, azoko, toy ny mahazatra amin'ny toe-javatra toy izany, nifanakalo hevitra tamin'ny mpiara-miasa aminay momba ny fialan-tsasatra lany. Niresaka momba ny fomba amam-pianakaviana ary ny zava-misy fa ny taranaka taloha dia matetika afaka mampianatra zavatra momba ny fankasitrahana. Tao anatin'ny tafatafa iray, nisy mpiasa iray nanonona tantara manaitaitra.
Nanomboka tamin'ny renibeny, izay ...
Tamin'iny volana lasa iny, dia pasitera GCI maro no nanatrika fiofanana momba ny asa fitoriana ny filazantsara, antsoina hoe "Outside the Walls", notarihan'i Heber Ticas, mpandrindra nasionaly an'ny ministeran'ny Filazantsara ho an'ny Fahasoavana Iraisam-pirenena. Natao izany tamin'ny fiaraha-miasa amin'ny Pathways of Grace, iray amin'ireo vondron-tsika any akaikin'i Dallas, Texas. Nanomboka tamin'ny fampianarana ny zoma ary nanohy ny asabotsy maraina ny fiofanana. Nihaona tamin'ny paroasy ny pasitera mba handeha hitety varavarana manodidina ny fotoam-pihaonan'ny fiangonana ary ...